UK: Maxkmad go’aan ka gaartay kiiska Ali Harbi ee dilkii xildhibaan Amess | dayniiile.com
Home WARKII UK: Maxkmad go’aan ka gaartay kiiska Ali Harbi ee dilkii xildhibaan Amess
UK: Maxkmad go’aan ka gaartay kiiska Ali Harbi ee dilkii xildhibaan Amess
Ali Harbi Ali oo ah 26 jir Soomaali ah ayaa maanta lagu helay dambi ah inuu dilay xildhibaan David Amess oo ka tirsanaa baarlamanka UK, kaasi oo uu ku weeraray kaniisad uu kula kulmayey cod-bixiyeyaal.
Ali ayaa dhowr jeer mindo ku dhuftay xildhibaan David Amess markii uu kaniisadda ku weeraray bishii October 2021, werarkaas oo uu ku qeexay mid uu uga aargudanayey taageero uu xildhibaanka siiyey duqeymo laga fuliyey Syria.
Waxa uu sidoo kale xusay in sababaha uu dilka u gaystay ay ka mid tahay in xildhibaan Amess uu ka tirsanaa koox baarlamaani ah oo lagu magacaabo “Saaxiibada Conservative-ka ee Israel.”
Dacwad-oogayaasha ayaa sheegay in Ali uu ahaa “argagixiso xagjir Islaami ah, dhiifoon oo xamaasadeysan.”
“Kani waxa uu ahaa ficil argagixisanimo oo aad u xun oo ay dhiiri-geliyeen aaminsanaanta fikrado iyo caqiidooyin diimeed,” ayuu yiri Nick Price, oo ah madaxa qeybta ka-horatgga argagixisanimada ee Adeega Dacwad-oogista Boqortooyada.
“Ali wuxuu doortay inuu gaysto dambi naceyb ah sababo naceyb iyo nafsaani ah dartood.”
Ali ayaa Maxkamadda Old Bailey ee London ay ku heshay dambi ah dil iyo diyaarinta argagixisanimo, kadib markii xeer-beegtida ay ku qaadatay kaliya wax ka yar nus saac inay go’aan gaaraan.
Dilka Amess oo ahaa xaasle 69 jir ah oo dhalay shan caruur ah, kana tirsanaa xisbiga Conservative-ka ee ra’iisul wasaare Boris Johnson, ayaa mowjado argagax leh u diray baarlamanka, wuxuuna horseeday baaqyo ku saabsan in amni wanaagsan la siiyo xildhibaanada.
Xildhibaanada British-ka ayaa inta badan kulmada dadweyne qabta ayaga oo haysto ilaalo aad u yar amaba aan haysan mararka qaar.
Ali ayaa dambi baarayaasha u sheegay inuu sanado qorsheynayey inuu dilo xildhibaan, islamarkaana uu indho indheyn ku sameeyey xarunta Baarlamanka iyo laba xildhibaan oo kale, oo uu ku jro Michael Gove, oo sidoo kale wasiir ah.
Wuxuu sheegay inuu “ku fashilmay” weeraradii hore kadibna uu ishaareystay Amess, sababtoo ah buu yiri ,“wuxuu ahaa kan ugu fudud.”
Ali ayaa sidoo kale Maxkamadda u sheegay inuu doonayey inuu ku biiro Daacish, islamarkaana uu rumeysan yahay in ficilladiisa ay caawin doonaan Muslimiinta, isaga oo isku qeexay Muslim “qunyar socod ah.”
“Haddii ay ila tahay in waxa aan sameynayo ay khalad yihiin, ma sameyn laheyn,” ayuu maxkamadda u sheegay.
Ali ayaa la xukumi doonaa taariikh kale oo aan la shaacin.
Previous articleMadaxweynaha Koonfur Afrika oo dhaleeceeyay kooxaha kasoo horjeedo dadka soo galootiga ah
Next articleSoomaaliya oo laga hirgeliyay warbaahin ay ka shaqeyn doonaan haweenka oo kaliya ah
caleema saarka Madaweynaha Soomaaliya Xasan shekh oo caawa laga dareemayo Muqdisho.
Jabuuti oo u dabaaldegtay sanadguuradii 45-aad ee xoriyadda
Wafdi ka socda Kenya & Koonfurta Suudaan oo soo gaaray Muqdisho
Meelo kamid ah Soomaaliya oo Maalintii Koowaad laga Sooman yahay
Madaxweyne Putin oo saxiixay sharci lagu qaadayo xaddidaadda da’da askarta Ruushka...
Mohamed Abdullahi Mohamed - May 28, 2022 0